‘निशुल्क एम्बुलेन्स सेवादेखि सुरक्षा र पोषणका कार्यक्रम ल्याएका छौं’ - SatyaPatrika
‘निशुल्क एम्बुलेन्स सेवादेखि सुरक्षा र पोषणका कार्यक्रम ल्याएका छौं’
मोहनमाया ढकाल,उपप्रमुख, वीरेन्द्रननगर नगरपालिका सुर्खेत ।
२०७८ बैशाख २९, बुधबार प्रकाशित
सुर्खेतका अन्य स्थानीय तहको तुलनामा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका स्वास्थ्य भौतिक पूर्वाधारले अघि छ । प्रदेश राजधानीमा अवस्थित यस नगरपालिकाले विकासे गतिविधिसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सुधार ल्याउन थालेको हो । यसैबिच नगर उपप्रमुख मोहनमाया ढकालसँग सुनौला हजार दिन अवधिका आमा र बच्चाको स्वास्थ्य तथा पोषण अवस्थाबारे गरिएको कुराकानी साराशं ः
सुनौला हजार दिन अवधिका आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणमा सुधारका लागि नगरपालिकाले के कस्ता कार्यक्रम संचालन गरेको छ ?
बिशेष गरी महिलाहरु गर्भवती भएदेखि सुरक्षित सुत्केरी हुदाँसम्म र त्यसपछिका दिनहरुमा पनि आमा र बच्चालाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भई नगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरेको छ ।
खासमा हामीले यसलाई दुई किसिमले लिएका छौं । जसमा एउटा सुरक्षा र अर्को पोषणका हिसाबले कार्यक्रम केन्द्रित हुन्छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणमा आमा गर्भवती भईसकेपछि सुत्केरी नहुनेबेलासम्म वीरेद्रनगरका सबै महिला दिदीबहिनीहरुलाई हामिले एक पटक निशुल्क भिडियो एक्सरे गर्ने कार्यक्रम ल्याएका छौं । उक्त सेवा कर्णाली प्रदेश अस्पताल, देउती नर्सिङहोम र सुर्खेत हस्पिटलबाट प्रवाह भइरहेको छ । यसका साथै गर्भवती महिलामा केही समस्या देखियो र उहाँको आर्थिक अवस्थाले धान्न सकेन भने पनि थप उपचार गर्नेे निर्णय सहितको निती लिएर बजेट पनि छुट्याएका छौ ।
त्यस्तै महिलाहरुलाई घरमा सुत्केरी नभई नजिकको वर्थिङ सेन्टर वा अस्पताल मै सुत्केरी हुन पे्ररित गरिरहेका छौं । जसका लागि अस्पताल जाँदा लाग्ने एम्बुलेन्स खर्च पनि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले दिने गरेको छ । नगरपालिका भित्र रहेका वडाहरुले पनि विभिन्न पोषणका कार्यक्रम संचालन गरेका छन् । साथै महिला स्वास्थ्य स्वयंमसेविका मार्फत गभर्वती महिलालाई परेका शारीरिक तथा मानसिक समस्याको जानकारी लिने, गर्भ जाँच गर्ने, आइरन चक्की नियमित खान लगाउने जस्ता जनचेतनामुलक कार्यक्रम जारी छन् ।
यस्ता कार्यक्रमहरु संचालन नगर्दा चाँही के हुन्छ ?
कतिपय सामाजिक मुल्य मान्यताहरुले गर्दा घरमै सुत्केरी हुने अवशेषहरु पनी अझै बाँकि छन् । गर्भवती महिलाले शारीरिक तथा मानसिक रुपमा भोग्न परेका समस्याहरु लाई त्यति गम्भीरता पूर्वक ध्यान दिएको नपाईने भएकाले सम्पुर्ण महिला दिदीबहीनीलाई सुरक्षित र स्वस्थ राख्न नगरपालिकाले नै यस्तो अभियान ल्याएन भने स्थिती नराम्रो हुन्छ । त्यसैले सुरक्षित प्रसुति सेवा दिने दर बढाउन र सुनौला हजार दिन अवधिका आमा र बच्चाको स्वास्थ्य तथा पोषणमा सुधार ल्याउन यस्ता जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु नगरी हुदैन । त्यसैले कसैको पनि स्वास्थ्यमा समस्या नहोस् र नगरवासी स्वस्थ हुन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।
साथै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भित्रका किशोरी तथा महिलालाई निशुल्क सेनेटरी प्याड पनि वितरण गर्दै आएका छौं । जसले गर्दा प्रत्येक महिना वडामा रहेको स्वास्थ्य चौकिमा महिला दिदीबहिनी आएर स्वास्थ्य समस्याका बारेमा स्वास्थ्यकर्मीसँग परामर्श पनि लिने गरेका छन् ।
स्वास्थ्यका कार्यक्रमबाट हालसम्म के कस्ता उपलब्धि भए । अनी कार्यक्रम संचालन गरिरहदाँ अप्ठ्यारो स्थिती सामना गर्नुपरेको छ कि छैन ?
स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रमबाट धेरै उपलब्धि हासिल भएका छन् । जस्तो वर्थिङ सेन्टर नभएका वडाका गर्भवती एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरेपछि सुत्केरी व्यथा लाग्नासाथ सहजै अस्पताल आउने गरेका छन् । भएका वर्थिङ सेन्टरमा पनि कहिले स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धता नहुदाँ वा जोखिममा भएको अवस्थामा रेफर गर्नुप¥यो भने सिधै एम्बुलेन्स बोलाएर अस्पताल जान सहज भएको छ ।
एम्बुलेन्स भाडा कहाँबाट तिर्ने भन्ने तनाव हुदैन । नगरवासीको स्वास्थ्य र पोषण स्थितीमा सुधार आएको छ । स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचमा पुगेका छन् । यीनै विविध उपलब्धि हासिल गरेको हामीलाई अनुभुती भएको छ । भने काम गर्दा अप्ठ्यारो त पक्कै नै हुन्छ । तर त्यसको सामना गर्दै अघि बढेका छौं । आवश्यक अनुसारको बजेट व्यवस्थापन नहुदाँ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति र उपकरण नहुदाँ अलि समस्या छ । तर यसलाई सुधारेर जानेछौं ।
हजार दिन अवधिका आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका लागि थप योजना केही छन् ? वा अबको लागि केही आवश्यकता महशुष भएको छ ?
पहिलो कुरा त लागुभएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छौं । यसका साथै सबैका घर आगनमा भएका खानेकुराहरु पोषिला छन् । मेवा, साग, काक्रा, सिमी जस्ता तरकारी तथा फलफुलहरु बारीमै उत्पादन गरेर खान प्रोत्साहन गरिरहेका छौं । आगामी दिनमा स्थानीय उत्पादनलाई मिठो तरीकाले खाने र उत्पादन गर्न लगाउने बिषयमा अभियान कै रुपमा कार्यक्रम संचालन गर्ने योजना छ । त्यस्तै लैङ्गिक कोष पनि खडा गरेका छौं । त्यसलाई बढाएर लैजाने र व्यवस्थापन गर्ने योजनामा छौं ।
अन्त्यमा, पोषणमा सुधार ल्याउन तपाईको प्रतिबद्धता के छ ?
हालसम्म हामीले यत्ति काम गर्र्यौं । अब पुग्यो भन्ने होइन । थप नयाँ किसिमका समस्या पनि आउन सक्छन् । तसर्थ सबैले आफ्नो घर आगनमा करेसाबारी व्यवस्थित गरौं । जोसँग घर छैन । जसको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । जसले मजदुरी नगरीकन खान पाउँदैनन् ।
त्यस्ता दिदीबहिनीको पहिचान गरेर उनीहरु जोखिममा हुनुहुन्छ भने, त्यो जोखिम अवधिभरी खाने बस्ने व्यवस्था नगरपालिका अथवा वडाले गर्ने गरी काम गर्ने कि भनेर योजना बनाउँदैछौं । त्यसैले नगरवासी आमा र बच्चा मात्रै होइन सबैको पोषण स्थितीमा सुधार ल्याउने गरी काम गर्ने योजना छ।
पहिलेको तुलनामा हाल निकै सुधार भएको छ । तर अँझै भएका कमिकमजोरीलाई पनि सुधारेर लैजानुपर्छ भन्ने उद्देश्यका लागि पोषणमा सुधार ल्याउन आवश्यक सबै कार्यक्रम संचालन गर्नेछौं ।
सलमानले भने– ‘राधे’ दर्शकले रुचाए सिक्वेल पनि बनाउँछु’